Ukushona kwelanga okuhle kakhulu eCaribbean | Izindaba Zokuhamba
Ukushona kwelanga okuhle kakhulu eCaribbean
Maria | | América, travel
Akulula ukufinyelela esivumelwaneni lapho unquma ukuthi yikuphi ukushona kwelanga okuhle kakhulu eCaribbean. Yize kuliqiniso ukuthi kunezindawo ezithile ezifeza cishe ukuvumelana okuphelele; amanye amasayithi axhumene nezinkumbulo zethu zeholide elimnandi noma ngenxa yesimo sazo esimangazayo, zivame ukuvela ezinkundleni zokuxhumana njalo.
1 Isi-Tulum (Mexico)
2 I-Havana Cuba)
3 I-Punta Kana (Dominican Republic)
4 I-Isla Margarita (Venezuela)
Ogwini lwe-State of Quintana Roo iTulum yaziwa njengedolobha lasekuseni ngamaMayan ababecabanga ukuthi yindawo enhle ukuqala usuku bebuka ilanga liphuma phezu koLwandle lweCaribbean. Ukushona kwelanga eTulum kuhle kakhulu. Izinkulungwane zezivakashi zisuka lapha ziyothola amabhishi ayo amahle aluhlaza okwesibhakabhaka, ama-cenotes ayo lapho ungacwila khona, futhi ngaphezu kwakho konke, amanxiwa ayo amaMaya, ithempeli lamatshe ngasolwandle okwamangaza abaseSpain lapho befika kulezi zingu.
Okunye kokubukwa kokushona kwelanga okuhle kakhulu eHavana kutholakala endaweni yokubuka evela eMorro-Cabaña Military Historical Park. Ingxenye yalokho okungenzeka ukuthi kwakuyinkimbinkimbi enkulu kakhulu yokuzivikela embusweni waseSpain. Leli paki lezempi elisendaweni yase-Old Havana, lakhiwa izinqaba ezimbili eziqinile: i-El Morro, nendlu yayo yesibani eyisibonakaliso, neLa Cabaña, isizinda sezempi esaziwa ngemibono yaso ngeMalecón nangomkhosi we-cannonball lapho amasosha iyunifomu yamasosha ngekhulu le-XNUMX liphinda liphinde liqhume inganono ethekwini laseHavana elikhombisa ukuvalwa kwamasango odonga.
I-Punta Kana (Dominican Republic)
Uma ungumthandi wemvelo nokuthwebula izithombe, uzophila umzuzu ongasoze ulibaleke ubuka ukushona kwelanga ePunta Kana. Lapha akunakugwenywa ukunweba usuku ujabulela amabhishi amahle aseCaribbean futhi ucabange ngayo yonke imincintiswano esibhakabhaka ethola lapho ilanga iye phansi. Akumangalisi ukuthi ukushona kwelanga kwePunta Kana kuphakathi kokuhamba phambili emhlabeni. Akukho lutho olungcono njengokunambitha isiphuzo olwandle.
I-Isla Margarita (Venezuela)
IPlaya Caribe itholakala e-Isla Margarita, imizuzu nje emihlanu ukusuka edolobheni laseJuan Griego. Kuyindawo enhle yezintaba nezihlahla zikakhukhunathi lapho ungabona khona ukushona kwelanga okuhle kakhulu eCaribbean. Leli bhishi linamanzi angajulile namagagasi aphakathi nendawo, okulungele ukuntweza.
Eminye imisebenzi okumele yenziwe ePlaya Caribe ukugibela izikebhe ezimfushane okuhambisana nabadobi bendawo noma imidlalo yamanzi efana nokugibela ubhanana.
Isimo esikhululekile seJamaica yisimo esihle sokujabulela ukushona kwelanga maphakathi neCaribbean. Kunezindawo ezingenakubalwa ongakhetha kuzo uma kuziwa ekukhetheni indawo enhle yokushona kwelanga. Ungakhetha ukuya phezulu kweLover's Leap, okuyindawo enhle edumile ebheke iTreasure Beach, eqinisekisa ukubukwa okuhle kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, iNegril mhlawumbe iyindawo ethandwa kakhulu ukubuka ukushona kwelanga. Qiniseka ukuthi uvakashela i-Rick's Café ukuze ubuke ilanga lishona emisindweni epholisayo ye-reggae.
Noma ngabe ufuna ukuhambahamba esihlabathini esithambile, yidla endaweni yokudlela ephelele yasolwandle ngenkathi uphuza i-cocktail, noma umane uthole indawo ethulile yokuhlala nokuthatha indawo lapho ilanga lishona, uqinisekile ukufakazela ukushona kwelanga okumangazayo ku isiqhingi saseBarbados. Kungenzeka ukubona ukushona kwelanga okuhle usuka eMiami Beach, eThe Gap, noma kunoma yikuphi lapho kuqhutshwa khona umgwaqo osogwini oluseningizimu, kepha ubheke kunoma yimaphi amabhishi amahle aseNtshonalanga Coast ukubona okuhle okunganikelwa yiBarbados.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » Ukushona kwelanga okuhle kakhulu eCaribbean
Imizi enabantu abaningi kakhulu emhlabeni